Izingane Izikhungo zezingane
Amantombazane ezingane ahlale ekhanyayo, enelanga, enemibala, egcwele ukuhleka kwezingane nokujabula, amaholide. Ngokuvamile, ingane yokuqala yomntwana ingensimini noma emkhombeni. Kodwa manje izikhungo ezahlukene kanye namaqembu okuthuthukiswa kwentuthuko asetshenziselwa ukuchitha izihlahla zikaKhisimusi kanye nezinwele zokubeletha izingane kuze kube seminyaka emibili.
Omunye ucabanga ukuthi kusenesikhathi, kodwa umkhuba ubonisa ukuthi ingane ithanda imisebenzi enjalo. Izingane ezinomdlandla zihlala kumama emaceleni bese zibuka okwenzekayo. Ubani okhudlwana, uhlanganyela eminye imidlalo noma ehola ukudansa, kodwa abashisekayo bazimisele ukulwa, bezama ukuthola iSanta Claus noma amanye amaqhawe kulo mdlalo.
Ilungiselela ukusebenza ekuseni
Kunoma yikuphi umama, kunoma yisiphi isikhathi kuyadingeka ukulungiselela kahle.
Futhi kufanele uqale nabazali. Qinisekisa ukuthi uthola okuvela kubafundisi noma kubaholi besikhungo abawuqhubayo, kungakhathaliseki ukuthi ungakwazi ukuya eholidini kuwe. Kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka ukuthi ushayele ugogo nomkhulu noma indawo ezovumela ukuxazulula kuphela omama abanezingane. Chaza ukuthi umama uzohlala isikhathi esingakanani, kungakanani ngaphambi kokuba ingane ingeniswa futhi isilungise (ukuze ingangeni emgodini we-pandemonium emnyango nangaphakathi egumbini). Ingabe kuyoba netafula elimnandi emva komama futhi kungena yini izindleko zeholide noma kufanele umuntu akhokhe okunye (njengendlela yokuzikhethela ukuletha eyakhe amaswidi).
Ngokuqinisekile bafuna ukugcina inkumbulo yamantombazane okuqala wezingane zabo, kodwa akuyona into elula lapho ngamunye ezama ukumbamba ingane yakhe, ngaleyo ndlela avimbele umzimba ezinganeni ze-vidostal. Phakamisa ukuthi uqashe umthwebuli wezithombe ozimele okhokhelwayo noma ucele othile kubangani bakho ukuthi benze iholidi kuvidiyo. Ngakho wonke umuntu uzothola ama-discs inkumbulo futhi ngeke kube khona izimo eziphikisanayo. Ngamaholide omnyaka omusha, uSanta Claus uvame ukunikeza izipho abazali abazilungiselele kusengaphambili. Ungakhohlwa ukupakisha bese uyisayine ekhaya, ukuze umntwana angamangala, futhi umdlali we-actor akadingeki ukuqagela ukuthi isiphi isipho esisele esikhwameni. Uma lo mntwana egcinwe enkulisa, njengombuso, emhlanganweni wabazali konke lokhu kuxoxwa ngakho, kodwa ngeke kusize ukucacisa.
Manje ungaqala ukwethula ingane kwisenzo esilandelayo.
Tshela ingane ukuthi uzowela emlandweni wezinganekwane, lapho wonke umfana nentombazane ezoba yiziqhawe zezinganekwane, kuhlanganise naye. Nonke nizohlangana ehholo elikhulu, nizobona ukusebenza, nifunde izinkondlo, nicule izingoma, udansa, nihlanganyele emincintiswaneni nasemincintiswaneni. Ukulanda kusengaphambili izingoma ezihambelana nendaba ye-matinee ingoma kanye nomntwana. Ungakhohlwa ukukhuluma ngesipho, kodwa ungenzi kubaluleke kakhulu, uma kungenjalo ingane ingakhala njalo ekuseni, ilinde isimangalo esithembisiwe. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi izingane ziyesaba owesilisa omdala onobuhlungu obomvu waseSanta Claus. Bonisa i-hero esithombeni, umxube naye, utshele umusa wakhe izingane, mayelana nomzukulu wakhe womzukulu.
Funda indima, izingoma nezinkondlo
Ngokuba imivimbo ye-sadikovskih, ukulungiswa kwemilolotelo kuyinto ehlukile. Ukufunda ngenhliziyo akusebenzi kuwo wonke umuntu, kungase kungabi nokuphefumula noma idokhumenti. Ungamshayeli umntwana. Ngokuqinisekile uzoyilungiselela ukubaluleka komcimbi, eqinisweni lokuthi kuyoba nabalaleli abaningi, kodwa ungahambi kakhulu. Liyivesi kuphela futhi uma ingane ilahleka, akufanele izwe ukuthi ikuvumela. Lokhu akuyona iminyaka futhi akuyona isikhathi lapho ukufunda okunjalo kwezinkondlo kuzuzisa khona.
Ingane, lapho ithole ingane yakhe yokuqala, iyoziqhenya kakhulu ngaye. Futhi uma kungazelelwe kubonakala sengathi uyamangalisa noma unenkani encane nje engafuni ukudlala ingulube noma amanzi, umsebenzi wakho ukumsiza ukuba athole isikhathi esihle kunendima ngayinye.
Tshela ingane ngomuntu wakhe, cabangela izinhlangothi zakhe ezihle futhi ezimbi. Ungabonisa amathoni ngeqhawe, bona amabhuku. Abantu abaningi ababi kakhulu badlala abantu abadala, kodwa uma indima eya kumntanakho, khona-ke uthi nje kulula ukudlala inhliziyo enhle, i-Amu idumile indima ebalulekile. Yenza konke okwenza umntwana wakho azizwe ekhethekile.
Funda amagama omndeni wonke. Hlukanisa indima phakathi komunye nomunye futhi izinto zizohamba ngokushesha. Ngisho nemidvwebo zikhunjulwa kalula futhi ngokushesha uma ziyazi futhi ziphindaphindiwe nxazonke.
Izindleko zokusebenza ekuseni
Ingane ngayinye izobaluleka ekuhambeni kwakhe - umlingisi ozohlala eholide. Okwencane kunazo zonke, into esemqoka akumele ilayishe i-suit ne-props. Akufanele usungula okuthile: ingubo, isigqoko, isigqoko se-bunny, ingonyama, ungenzi ngaphandle kwamaphiko emhlane ngemuva komqhele wakho obukhali. Qinisekisa ukuthi ingane ayithinti izingubo, i-ion ayinaki kakhulu. Phela, ngesikhathi sonyaka owodwa lokhu kuyimemori yabazali.
Abaneminyaka emibili nantathu ubudala sebevele befuna ukuba nesithombe esithile kuleli holide. Uma ingadi emanzini ihlinzeka isihloko esithize, khona-ke umbuthano wabalingiswa uba mncane futhi udinga nje ukuphumelela kahle. Kule nkinga, amantombazane enhlanhla-amasosha. Izingane zabo, njengombuso, ziyizifundo zesayensi enembile kakhulu futhi zangempela. Zama ukwenza ngayo nendodana noma indodakazi yakho encane. Nikeza uhlobo oluthile lomsebenzi, isibonelo, ukuhlanganisa i-snowflake (ngaphansi kwesigungu sakho) noma ukukhetha imvula efanele. Ungathenga i-suit eyenziwe ngomumo noma uyiqashe. Ingabe kuwufanelekile ukuchitha izingubo ezifunwa yi-volumetric - umbuzo omkhulu, ngoba abahlali bekhululekile njalo emntwaneni, kodwa njengendlela yokukhetha, kunganjani. Amafemu ahlinzeka izingubo nganoma yikuphi ukunambitheka nombala, uzothola kuwo wonke amadolobha.
Uma ungayitholi indima ethile, vumela ingane ukuba ikhethe i hero engathanda ukuyenza. Mnikeze izithombe zezilwane ezihlukahlukene, izilwane ezidliwayo nezifuywayo, ama-super-heroes, izinhlamvu zezithombe zamathandani nezintandokazi. Yenza kanye nezingane. Mhlawumbe kuzodingeka ufunde izindlela ezintsha ze-papier-mache noma ubuciko be-embroidery, ngokuqinisekile, ukuzalwa kwezingane kuzophinde kusibuyise lapho sisencane.
Ezikoleni zezikole zokubeletha kungenzeka ukuthi zingathandeki kakhulu futhi izingubo zizofuna minimalist. Okuphezulu kunalokho ongayikhohlisa ingane - isikhwama kanye ne-raincoat. Kodwa uma efuna ukuba namanje uhlamvu olukhanyayo emaseni, siza ukhethe isithombe esizofanisa iminyaka nobudala.
Amaqembu ezingane zakusasa ziholide ezibalulekile empilweni yomndeni wakho. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi, naphezu kwazo zonke ukuqeqeshwa, i-kid nje ayinayo imizwa, amagama akhohliwe, isethulo sesaba. Ungesabi futhi uzame ukuzolalisa ingane, umsekele, ungamjezisi, kodwa, ngokuphambene nalokho, umkhuthaze. Mhlawumbe, phakathi nosuku, ingane ivuka futhi iphela ngokujabula. Amaqembu omnyaka omusha ngokuvamile kufanele aphuthelwe emakhazeni. Yiqiniso, lokhu kuphazamisa bonke abadala nabantwana, abaye balungiselela amasonto ambalwa, kodwa kukhona indlela yokuphuma. Ngomuso weNyaka Omusha, futhi njalo emva kwayo, uchitha amantombazane amaningi esikhungweni sokuzilibazisa, amaqembu okuzilibazisa komndeni, ukuthi ungahamba nomntwana ukuya komunye umama futhi imizamo yakho yokuhlanganyela ngeke isetshenziswe.
Sifisela wena amathiphu amahle, izinhlamvu ezimibalabala, izinkondlo ezifundwayo nokuzizwa kahle ezikoleni zezingane zomkhaya wonke.
Ihlaziya kudivayisi yengane enkulisa
Izingane ezinesineke enkulisa nasezikoleni
Kungani abazali abacebile banikela izingane zabo ezikoleni ezizimele?
Ngabe ingane ingathunyelwa nini esikoleni?
Ukunquma ukulungela ingane esikoleni
Iholide ehlobo enkulisa
Unganikeza izingane ezincane amafutha okudoba?
Isaladi ye-beet, ushizi wezimbuzi kanye ne-arugula
Kufanele udle kaningi kangakanani?
I-Psychology yokuziphatha komuntu ekusebenzelaneni nabesifazane
Utamatisi ogoqwe nge-inkukhu kanye nemifino
Ukwelashwa ngamakhambi omuntu we-endometriosis
Ukunakekela ekhaya ebusika
Ingulube encane ibhalwa epholiseni
Indlela yokwenza i-inhalation ekhaya?
I-Henna ngokumelene nezinwele ezimpunga: izindlela zokupheka ekhaya
Ukwelashwa kwezipikili ezinobuthakathaka kanye namakhambi abantu
Smart, enhle, enesizungu noma kungani ngingenalo inhlanhla